Warar Hordhac ah oo ka Soo Baxaya Budhcadii Dilka ka Gaysatay Minneapolis – Rasaasa News
Wararka hordhaca ah oo ka soo baxaya booliska Menneapolis ayaa sheegay in dilkii labadii wiil ee walaalaha ahaa iyo ninka sadexaad oo la yidhaahdo Anwar Maxamed Saalax isagu ah nin reer Diri Dawa ah.
Sida uu shegayo war ka soo baxay Booliska ayaa waxaa uu sheegayaa in dilka uusan ahayn mid budhcad ay samaysay, balse uu yahay md ay galeen dad ka tirsan Jaaliyada Somalida. Wuxuu Boolisku ka codsaday Jaaliyada Somalida in ay la shaqeeyaan Booliska, oo ayna cidina isku dayin in ay qariso dambiileyaasha.
Waxaa uu boolisku cadeeyey in dilka ay gaysteen saddex dhalinyaro Somali ah, wajiyadoodan si wanaagsan looga arko, sawir qaadada suuqa weyn 24 la yidhaahdo. “Waxaanu u baahan nahay in ay xubnaha Jaaliyaadku cadeeyaan dambiilayaasha marka aanu sawirkooda tusno”.
Ugu horeynaba waxaa war lagu kalsoonaan karo sheegtay gabadh, waxayna tidhi “aniga oo dukaanka wax ka gadanaya ayaa waxaa soo galay saddex will, kolkaas ayuu mid ka mid ah wiilasha dhintay nimanka waxyeelo ayey wadaan”, intaa ka waan ka baxay dukaanka, waxaanan ku soo baraarugay iyada oo la lee yahay dukaanka wiilashii gadayey waa la dilay.
Anaga oo aan doonaynin in aanu ka hor dhacno, ayey warar xan ah sheegayaan in dilka labada wiil uu yahay mid la soo qorsheyey oo doqonimo ah, ayna ka dambeeyaan dad ka tirsan Jaaliyada Somalida Ogadeeniya Sandiego.
Hadii ay wararkani run noqdaan, waxaa ay dhibaato weyn soo foodsaaraysaa qurba joogta Somalida Ogadeeniya.
Waxaa loo fadhiyaa tacsi, aad iyo aad ayeyna dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee Minneapolis u walwashan yihiin.
Wixii warar dheeraad ah ee ka soo kordha waanu idinla soo socod siin doonaa kolka ugu haboon.